Ancelotti: Isco wuu bedeli karaa Modric
HomeChampions LeagueAncelotti: Isco wuu bedeli karaa Modric
Carlo Ancelotti ayaa muujiyey inuu aad ugu kalsoon yahay in Real Madrid ay leedahay awoodii ay kula qabsan lahayd una buuxin lahayd xidigaha ka dhaawacan ee Luka Modric, Gareth Bale iyo Karim Benzema iyagoo ku jira is diyaarinta ciyaarta is aragga labaad ee Champions League rubuc dhamaadkiisa oo ay ka hortagayaan Atletico Madrid.
Kooxda garoonka Santiago Bernabeu ayaa todobaadkii aynu soo dhaafnay ku guuleysatay inay barbar dhac gool la’aan ah ku qabato kooxda ay sida weyn u ficil tamaan, caasimadana ka wada dhisan yihiin, laakiin is aragan labaad garoonkeeda kula ciyaaraysa iyadoo ay maqan yihiin xidigo hal bowle u ah isla markaana tiir dhexaad u ahaa kooxda koobaad ee ciyaarta lagu bilaabo.
Ancelotti ayaa u muuqda mid aad isu dejinaya oo xaalada si fiican uga soo baaraan deggay, waxaanu aaminsan yahay in Isco uu u buuxin karo booska Modric ee khadka dhexe, halka xidigaha Jese iyo Chicharito ay ku haboon yihiin inay qabtaan shaqadii Benzema iyo Bale.
“Waxaa naga maqan ciyaaryahano muhiim noo ahaa, laakiin suurto gal maaha inaanaan ka sii rajo iyo dardar fiicnaan sidii aanu ahaan lahayn . Waa inaan noolaanaa anagoo dhaawacan. Hore ayaanan tan oo kale u samaynay, kalsoonidayadana waxba uma dhimin,” ayuu Ancelotti ku yidhi shirkiisii jaraa’id.
“Isco hore ayuu uga ciyaaray booska Modric si fiicana wuu uga soo baxay shaqadaas. Dhawr arimood oo aanu haysano ayaa jira xataa iyadoo ay naga maqan yihiin Bale iyo Benzema. Waxaa noo jooga James, Jese iyo Chicharito. James hawl weyn ayuu qabtay, labada boosba dhexda iyo dhinaca midig, labadaba si weyn buu uga hawl galli karaa. Chicharito sidoo kale qaab ciyaareedkiisii wuu soo noqday, jidh ahaan iyo maskax ahaanba.
“Waxaan soo xulan doonaa kooxda ugu fiican ee safka hore. Waxaan wataa kulankan koox naadiga ka caawisa inay u ciyaarto sidii aanu u ciyaarnay is ciyaarti hore oo kale. Maskaxdayda waxaan ku hayaa kooxdii ugu fiicnayd dunida ee la soo xusho oo ii diyaarsan.”
Xulka Argentina Oo Lagu Ciqaabi Doono Qoraal Siyaasad Ah Oo Ay Garoonka La Soo Galleen
Conte Oo Is Qaawin Doona Haddii Ay Chelsea Caawa Ku Guuleysato Horyaalka Premier League